Jiron'ny Jirama: Niaka-bidy 45% ary foanana ny tarif social première tranche
samedi, 10 février 2018 08:58
Ny orinasa JIRAMA dia mampafantatra ny mpanjifa rehetra fa nanomboka ny volana janoary 2018 no nihatra ny fampiakarana ny vidin-jiro. Ny fanjifana volana desambra 2017 no iharan'izany ary faktiora voarain’ny mpanjifa nanomboka ny volana janoary no ahitana izany fiakarana izany.
Tsy iharan’io fisondrotana io ny mpanjifa manana fandaniana latsaky ny 25kWh. Raha mihoatra io kosa ny fandaniana, dia ilay fandaniana amboniny 25kWh no takiana amin’ny saran’ny « deuxième tranche ».
Kajiana amin’ny vidin-jiro tokana ny fandaniana ataon’ireo mpanjifa mampiasa fitaovana an-tokantrano (usage domestique) mihoatra ny 3 kW. Izany hoe, tsy mihatra intsony ny « Première tranche » sy ny « Deuxième tranche ».
Marihina fa efa nisy ny fifampidinihina tamin’ireo mpanjifa isan-tsokajiny talohan’ny fampiharana ny fisondrotana.
Na mampihatra io fiakaran’ny vidin’ny herinaratra io aza ny Jirama dia mbola mivarotra amin’ny fatiantoka amin’izao fotoana izao. Maro anefa ireo asa fanavaozana efa natao sy mbola ho atao. Ao anatin’ny tanjona entina hampihenana ny elanelana eo amin’ny saran’ny famokarana jiro sy ny vidiny hivarotana azy izao fanapahan-kevitra izao. Na eo aza io fisondrotana io dia mbola tsy mahafeno ny banga ho fenoina anefa izany.
Tanjon’ny orinasa JIRAMA ny hananana fizakan-tena ara-bola, tsy misy fanampiana avy amin’ny Fanjakana intsony na « subvention ».
Ireto misy toro hevitra vitsivitsy ahafahan’ny mpanjifa mitsitsy ny fandaniana herinaratra :
- Pihina ny jiro rehetra izay tsy ampiasaina
- Tsoahina avokoa ny fitaovana mitsatoka amin’ny prise rehefa vita ny fampiasana azy.
Ho an'ny jiro fampiasa ao an-tokantrano dia manana tarif 2 samihafa ny Jirama:
- Tarif 14 izay natokana ho an'ny Mpanjifa tsy mila tanjaka mihoatra ny 3 kW.
Mizara roa ny vidin-jiro ho an'io tarif io : ny ampahany voalohany hatramin'ny 25kWh dia tsy niova ny vidiny fa 141 Ariary ihany ny 1kWh, raha mandany mihoatra an'io 25kWh io kosa ny Mpanjifa anatin'ny volana, dia anatin'ny ampahany na tranche faharoa indray izany, io dia nisy fiakarany kely.
- Ny tolotra faharoa dia ny tarif 16, nisy fizarana ho ampahany 2 ihany koa ka hatramin'ny 130kWh ny voalohany ary ny ambin'ny fandaniana no tranche 2. Io tranche 2 eo teo aloha dia 370Ar/kWh ary ny tranche 1 dia 205Ar/kWh.
Manomboka ny faktiora janoary 2018 dia tsy lasa hitovy avokoa io vidiny io na ho an'ny ampahany 1 na ny ampahany 2. Izany hoe vidiny tokana 370Ar na firy na firy kWh ny fandaniana.
Raha toa ka eo amin'ny 400kWh eo ny fandaniana isam-bolana dia eo amin'ny 22.000 Ariary eo ny totalin'ny fisondrotana.
Inona no mety tarif 14 sa 16 raha ho an'ny vao an-tokantrano ? Arakaraka ny tanjaky ny fitaovana ampiasaina sy ny faharetan'ny fampiasana izany.
Tarif 14 raha toa ka ny fitaovana miaraka ampiasaina dia latsaky ny 3kW na 3000W.
Na dia latsaky ny 3kW aza ny tanjaky ny fitaovana miaraka ampiasaina ka maharitra be ny fampiasana azy ary mihoatra ny 60kWh isambolana izany dia tsara kokoa ho an'ny Mpanjifa ny manao famandrihana amin'ny tarif 16 satria dia ho lafo izany.
Raha toa ka mila tanjaka be ny fitaovana ampiasain'ny Mpanjifa, 3kW noho miakatra dia tsy azony atao intsony ny manao famandrihana ho amin'ny tarif 14.
Ny tarif 16 dia misy prime fixe, saran'ny famandrihana tanjaka isaky ny kW fandrihana. Ny tarif 14 kosa dia tsy misy sarany ny famandrihana tanjaka satria dia kely izany satria latsaky ny 3kW.